» नेपालबाट युट्युबको ट्याक्स फर्म कसरी भर्ने ?
नेपालबाट युट्युबको ट्याक्स फर्म कसरी भर्ने ?
२८ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०८:११
मकवानपुर, २८ फागुन । नेपालबाट प्रत्येक युट्यबरले आफ्नो भिडियोहरु संयुक्त राज्य अमेरिकामा हेरिएबापत प्राप्त भएको रकममा कर तिर्नुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि प्रत्येक युट्युबरले आफ्नो करसम्बन्धी जानकारी युट्युबलाई दिनुपर्ने हुन्छ । एउटा फर्म भरेर यो समस्याको हल गर्न सकिन्छ । करको बारेमा जानकारी प्रदान गरिएमा युट्युबबाट हाम्रो भिडियो अमेरिकामा हेरिएबापत पाएको रकममा लाग्ने जति मात्र कर युट्युबले काट्नेछ तर यदि हामीले आउँदो मे ३१ तारिखसम्म पनि करको जानकारी फर्म भरेनौँ भने युट्युबले प्रत्येक महिना कमाएको सबै रकमको २४ प्रतिशत पैसा काटेर मात्र हामीलाई पैसा पठाउनेछ । यसरी २४ प्रतिशत काट्दा अमेरिकामा हेरिएको भिडियोमा मात्र नभई जुनुसुकै ठाउँमा हेरिएको भिडियोबाट प्राप्त रकम युट्युबले काट्ने जानकारी दिएको छ । कसरी भर्ने त युट्युबको ट्याक्स फर्म ? आउनुहोस् यो भिडियोमा हामी तपाईलाई प्रत्येक स्टेपको जानकारी दिँदैछौँ । हेर्नुहोस् भिडियो–
युट्युबरहरुको होस् उडाउने नयाँ अपडेट युट्युबले ल्याएको छ । सम्भवत युट्युबरहरुको लागि यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा नकरात्मक अपडेट हो । अब प्रत्येक युट्यबरले आफ्नो भिडियोहरु संयुक्त राज्य अमेरिकामा हेरिएबापत प्राप्त भएको रकममा कर तिर्नुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि प्रत्येक युट्युबरले आफ्नो करसम्बन्धी जानकारी युट्युबलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी करको बारेमा जानकारी प्रदान गरिएमा युट्युबबाट हाम्रो भिडियो अमेरिकामा हेरिएबापत पाएको रकममा लाग्ने जति मात्र कर युट्युबले काट्नेछ तर यदि हामीले आउँदो मे ३१ तारिखसम्म पनि करको जानकारी फर्म भरेनौँ भने युट्युबले प्रत्येक महिना कमाएको सबै रकमको २४ प्रतिशत पैसा काटेर मात्र हामीलाई पैसा पठाउनेछ । यसरी २४ प्रतिशत काट्दा अमेरिकामा हेरिएको भिडियोमा मात्र नभई जुनुसुकै ठाउँमा हेरिएको भिडियोबाट प्राप्त रकम युट्युबले काट्ने जानकारी दिएको छ । त्यसैले पनि यो अपडेट निक्कै दुःखदायी हुने भएको छ ।
युट्युबमा गुगल एड्सेन्स, सुपर च्याट, सुपर स्टिकर, मर्चेण्डाईज लगायतका सबै सेवाबाट हुने कमाईको कर तिर्नुपर्ने भएको हो । हामीले अपलोड गरिएका भिडियोहरु यदि संयुक्त राज्य अमेरिकामा हेरिन्छ भने त्यही भिडियोमा भएको कमाईको मात्र कर तिर्नुपर्छ तर ३१ मेसम्म हामीले करको जानकारी भरेनौँ भने अमेरिकामा हेरिएको भिडियोमा मात्र नभई जुनसुकै देश वा स्थानमा हेरिएको भिडियोमा प्राप्त कुल कमाईको २४ प्रतिशत काटिने भएको हो । युट्युबको यो नियम अमेरिका बाहेक सबै देशमा लागुहुने छ । त्यसैले नेपाली युट्युबरहरुले पनि आफ्नो प्यानको बारेमा जानकारी भर्नुपर्ने भएको छ । युट्युबरहरले व्यक्तिगत च्यानल भएमा व्यक्तिगत प्यान नम्बर र कम्पनी मार्फत भए कम्पनीको प्यान नम्बरसहित अन्य आवश्यक जानकारीहरु भरेर आफ्नो कमाई सुरक्षित गर्न सक्नेछन् । तर यदि करसम्बन्धी विवरण नभरेमा सबै कमाईबाट २४ प्रतिशत कमाई गुमाउनुपर्नेछ ।